Isikhokelo kwiMimoya yamaShinto okanye oothixo
Unqulo & Umoya Amanqaku emfundiso
Ukuchaza iKami njengeMimoya yaseShinto inzima
Imimoya okanye oothixo baseShinto baziwa njengekami . Nangona kunjalo, ukubiza 'oothixo' babantu akunjalo ngokuchanekileyo kuba ikami ngokuqinisekileyo iquka indawo ebanzi yamandla okanye amandla. U-Kami uthatha ezininzi iingqiqo ngokuxhomekeka kumongo kwaye akubhekiseli nje kumgaqo weNtshona kaThixo okanye oothixo, nokuba kunjalo.
Nangona i-Shinto idla ngokubizwa ngokuba 'yindlela yonqulo,' i-kami ingaba yinto efunyanwa kwindalo enjengeentaba ngelixa ezinye zingabinabantu.
Olu hlobo lokugqibela luya kuhambelana nokucinga okuqhelekileyo koonkulunkulu noothixokazi . Ngenxa yesi sizathu, iShinto idlalwa ngokuba yinkolo yonqulo .
I-Amaterasu, umzekelo, yinto ebalulekileyo kunye neyodwa. Nangona emele impawu yendalo - ilanga - unalo negama, intsomi edibene nayo, kwaye idlalwa ngokucacileyo kwifom ye-anthropomorphic. Ngaloo ndlela, ufana nesimo esiqhelekileyo seNtshona wesetyithikazi.
Ezinye ezinye iikami zininzi ezingapheliyo. Bahlonishwa njengemiba yendalo, kodwa hhayi njengabantu ngabanye. Imifula, iintaba kunye nezinye iindawo zinekami, njengeziganeko ezifana nemvula kunye neenkqubo ezifana nokuzala. Ezi bhetele zichazwe njengeemimoya zomoya.
I-Ancestral kunye neMimoya Yabantu
Abantu ngabanye banekami yabo ephila emva kokufa komzimba. Iintsapho zihlala zihlonipha i-kami yooyise. Ubuhlobo bentsapho bugxininiswa kwinkcubeko yaseJapan kwaye ezi zibophelelo azipheli ekufeni.
Kunoko, abaphilayo nabafileyo kulindeleke ukuba baqhubeke bekhangelana.
Ukongezelela, uluntu oluninzi lunokuhlonela i-kami yabantu abathandekayo abafayo. Kwiimeko ezinqabileyo, i-kami ebaluleke kakhulu, abantu abaphilileyo bayahlonishwa.
I-Confusing Concepts ye-Kami
Ingcamango yekami idibanisa kwaye idibanise nabalandeli beShinto.
Kuqhutyelwa rhoqo ukuba nabaphandi abathile kwisiko baqhubeka bezama ukuqonda ngokupheleleyo. Kuye kwathiwa ukuba abaninzi baseJapan namhlanje banxulumene nekami kunye nomgaqo weNtshona wokuba unamandla onke.
Kuhlolisiso lwemveli lwekami, kuyaqondwa ukuba kukho izigidi zekami. I-kami ayibhekiseli kubomi kuphela, kodwa umgangatho ngaphakathi kwezilwanyana, okanye ubunzulu bobukho ngokwalo. Oku kufaka kubantu, kwindalo, nakwizinto zendalo.
U-Kami, ngokwenene, enye yezo ngqiqo zokomoya ezinokufumaneka kuyo yonke indawo nakuyo yonke into. Ipropathi eyimfihlelo eyasungulwa ngenxa yokuba akukho ntlukwano ngqo phakathi kwezinto eziphathekayo kunye nobomi bokomoya. Abaphengululi abaninzi bakhetha ukuchaza ikami njengento eyoyikisayo, ibonisa ukugqwesa, okanye inempembelelo enkulu.
I-Kami ayilungile ngokupheleleyo, nokuba. Kukho inani le-kami elithathwa njengelibi. KwiShinto, kukholwa ukuba yonke ikami inako ukucaphuka nangona ikhusela abantu ngokuqhelekileyo. Aphelelanga ngokupheleleyo kwaye angenza iimpazamo.
'UMagatsuhi Kami' uyaziwa njengamandla anika izinto ezinokubangela ukungalunganga kunye nezinto ezingalunganga ebomini.
Ukukhangela uSathana Ngamehlo AmaLuciferi
I-Scientology Galactic Overlord Xenu
UAleister Crowley, umProfethi weThelemic
Zine zeSathana iinkosana zeSihogo
AmaSathana anamaGciwane angamaNtsholongwane e-Biblical and Hebraic Origin
Iyintoni indlu yeCob? Architecture elula yomhlaba
Imfazwe ye-1812: iMfazwe yaseNorth Point
Ukuqulunqa iMhlathi kwixesha elidlulileyo lokuzivocavoca
Ukuhlola i-Yellowstone Supervolcano
Ukufundisa izakhono zoBomi kwiKlasi
Yintoni i-Snow Snow?
I-Ring of Fire